Niaritra ny hazo fijaliana ho antsika i Kristy
"Ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona Izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana." Fil. 2:8.
Mba hahazoany ilay fifaliana napetraka teo anoloany dia ny niaretan'i Kristy ny hazo fijaliana, noreseny ny henatra, ary dia mipetraka eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra mandrakizay Izy. Nanolo-tena ho fanatitra Izy ka maty teo amin'ny hazo fijaliana ho an' izao tontolo izao, ary avy amin'io sorona nataony io no ahatongavan'ny fitahiana lehibe indrindra azon'Andriamanitra arotsaka, dia ny Fanahy Masina izany. Ho an'izay rehetra handray an'i Kristy io fitahiana io.
Ny tontolo lavo dia tanim-piadiana ho an'ilay ady lehibe indrindra izay mbola tsy fahitan'ny lanitra manontolo na ireo fahefana eto an-tany hatrizay. Io tontolo io no voatendry ho sehatra ifanandrinan'ny tsara sy ny ratsy, ny lanitra sy ny helo. Mandray anjara amin'io ady io avokoa ny olombelona tsirairay. Tsy misy afaka miala amin'izany. Tsy maintsy misafidy ny olona na manaiky na manda Ilay Mpanavotra izao tontolo izao. Vavolombelona ny rehetra, na mpanara-dia na mpanohitra an' i Kristy. Miantso ireo izay eo ambany fanevany i Kristy mba hiara-hirotsaka Aminy ao amin'ilay ady tahaka ny miaramila mahatoky, mba handovan'izy ireo ilay satroboninahitra fiainana. Natsangana ho zanakalahy sy zanakavavin'Andriamanitra izy ireo. Namela teny fikasana ho azy ireo i Kristy, nanotne toky fa lehibe ny valim-pitian'ireo izay miara-miombom-pijaliana sy fahafaham-baraka Aminy noho ny amin'ny fahamarinana any amin'ny fanjakan'ny lanitra.
Mihaika ary amin'ny farany dia handresy ny hery eto an-tany sy ny herin'ny helo ny hazo fijalian'i Kalvary. Ao amin'ny hazo fijaliana no misy ny hery rehetra, ary avy ao no ivoahan'ny hery mahataona rehetra. Io no ivo lehibe misarika indrindra satria teo no nanoloran'i Kristy ny ainy ho an'ny taranak'olombelona. Natolotra io fanatitra io mba hamerenana ny olona amin'ny fahatanterahany tany am-boalohany, eny, mihoatra noho izany aza. Natolotra izany mba hitondra fiovana tanteraka eo amin'ny toetrany, hahatonga azy hanoatra noho ny mpandresy. Ireo izay mandresy, amin'ny alalan'ny herin'i Kristy, ilay fahavalo lehiben'Andriamanitra sy ny olona dia hanana toerana any an-danitra, izay ambonin'ny an'ireo anjely tsy mbola lavo. - OCR, 1 Aprily 1899.